Ahoana avy ny tovovavy tsirairay aho hihaona te hanambady ve aho
Noho izany aho ary izaho matetika hihaona ankizivavy izay voalohany toa liana amin’ny ahy, fa avy eo foana izy ireo milaza fa te-hanambady ahy.
Inona no azoko atao mba hanova izany? Manaraka ny ankizivavy iray mahatonga ny fanehoan-kevitra toy izany, ny hoe tena? Tsy nieritreritra ny tenako aho ho toy ny fanambadiana karazana.
Avy eo dia nihomehy sy hanova ny foto-kevitra
Izy ireo dia tsy ny dian-tongotra sy mijery ianao, ary hanontany tena raha toa ka dia lehibe ary ny sasany dia miezaka ny hahazo anao mba ovay ny-tsaina sy te daty ianao. Mino aho fa raha ny ankizivavy no milaza fa tsy mahita anao ho toy ny zava-tsarotra sy mihevitra ny fiainana ho azo antoka sy tsy mankaleo anareo. Mampiseho kokoa ny daredevil side sy tsy miraika ary mamela azy ireo hahita misy mihoatra noho ny taka-maso no momba anao. Tsara, ianao dia tsy maintsy ho tena tsara tarehy, na ny manan-karena na ny zavatra toy ny olona hafa efa niteny. Nefa angamba tokony ho azo antoka fa ny zazavavy fa ny daty na ny mahita ireo liana ianao noho ny antony tsara. Ny fifandraisana dia tokony haorina eny ny fifandraisana fa tsy manana ary tsy ny momba ny fifankatiavana ho iza marina moa ianareo. Raha manana ny tena asa tsara ary ho be dia be ny vola sy hita taratra fa ny vehivavy, dia ho tia anao noho izany antony izany. Fotsiny ianao mila mitady tovovavy izay tia anao ho anao. Angamba ianao fotsiny ny fandaminana teo karazana fantatrao. Angamba ny tovovavy hahita anao ary ry zareo toy ny Eny fantatro, izaho tsy marary izy. amim-pahatsorana aho tsy miezaka ny hanao izany ny vazivazy izay efa vao tsy nandre izany teo aloha. inona no u toy ny tsara ny miaraka amin’ny ankizy na ny zavatra?? Angamba u tokony hiezaka nilaza ny tovovavy avy any amin’ny vavahady izay tsy mitady ny hanorim-ponenana any. Lazao azy ireo u te-olona iray izay mandeha amin’ny adventures miaraka aminao. lol fa ny zava-dehibe tokony ho fantatrao alohan’ny manomboka zavatra hatao lehibe. angamba izy mieritreritra ny tsara eo am-pandriana na efa lehibe ny zaza.
Lol na angamba ianao tsy tonga korontam-bato ny vola lol
na izy roa: o) dude feo toy ny milamina tsara vintana sy tsara toetra, sns. Nefa ny marina, tsy maika, maka taona talohan’ny ianao dia mieritreritra ny hanambady izy. Manao ny olona ho amin’ny fiainana, dia be fanoloran-tena. ny olana matetika ny vokatra ny maro taona teo amin’ny tsipika.
Ny marina tsy mba maika izany
Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono, Manimba ny zaza tsy ampy taona, ny herisetra na fandrahonana, ny fanenjehana na ny fanafihana ny fiainana manokana, impersonation na diso, ny hosoka, na ny jono
← Tovovavy ho an'ny Fiarahana
Izao tontolo izao Mampiaraka an-Tserasera Fampiharana Ny Mampiaraka mba manadala ankizilahy, Chat, ary Raiki-pitia →